Daawo: Khasaaraha dagaalkii shalay oo Kordhey iyo Gudi ka tegay Laascaanod | KALSHAALE
Daawo: Khasaaraha dagaalkii shalay oo Kordhey iyo Gudi ka tegay Laascaanod
Sep 7, 2018 - 9 Aragtiyood
Laascaanood ( Kalshaale) Guddi ka kooban Culimo iyo Odoyaal oo isu xilqaamay nabadaynta ayaa saaka shir Jaraa’id ku qabtay magaalada Laascaanood , Waxaa ay gudigani baaq canaan iyo caqli celin ah u direen labadan beelood ee shaqaaqada soo noq noqotay ku dhex maray magaalooyinka Dhumay iyo Dabataag .
Ugu danbayntii , Gudigan ayaa iminka ka anbabaxay magaalada Laascaanood , iyagoo ku jeeda deegaanadii ay dhibaatadu ka dhacey , Waxaa la laayey Haween Waayeel iwm Waxaana iminka labadan beelood ay isu horfadhiyaan goobihii shaya dagaalku uu ka dhacey iyagoo soo dhoobay awoodoodii Hub Ciidan iwn
Ugu danbayntii , Gudigan Nabadaynta ayaa u baahan Taageero kala duwan oo isugu jirta u Qabsoomid , Dhaqaale iyo in lala shaqeeyo .
Walaalayaal Dagaalka Hala Joojiyo .
War dholbahantow runta isu sheega reerkaa Bahararsame waa far dheeraatay maalinba qolo ayay isku taagaan. Ilaahay umada ha kala qaboojo laakiin waa in runta la isu sheegaa reerkaa isha ha lagu hayo.
Oo haday hada ka hor cumar maxamuud isku dhaceen ma far dheeraatay bay noqdeen war dadka waa loo gar naqaayee la iskama xukumo.
Sida aan taariikhda ku hayo bah ararsame waa reerka ugu nabada jecel dhulbahante.u badi in laga gardaran yahay.
Kollay wiil yar oo reer baadiya ah oo qori wata sida nabad looga keeno wey adag tahay.
Waagay bah ararsame reerka u talin jireen dhulbahante wuu calan walayn jiray hayeeshee hada habar kasta garaad waxay ku sheegtay ayey caano ku shubtay ka dibna meelahaa u qadhaab tageen.
Waa laga yaabaa waxanay garaadada ku sheegaan ee faraha daban ee subax kasta la magacaabo haday iska daadiyaan in sharaftoodii soo laabato.
Anagu dhulbahante oo hal garaad leh baan ogayn mudo yar ka hor iyo mid xin loo sameeyey ka dib tusbax go’ay bay noqdeen.
Anna caag caano ah ii keena ayaa ka dhacday.
alle hakala qabojiyo nabadana hafansiyo
Ilaahay hakala qaboojiyo.
Dhulbahante beryahaan meel inkaarta uga timid garan maayo.
Tolow ma Iidoorka ayaa isku hubaynaya?
Qaybi oo xukun?
Rag ayagii sidaas isugelaya ma Dhabayacaa tolnimo ka sugeysa?
waxa wanaagsan in ergadaa isxilqantay lodaayo laga daayo doco docaynta
Sxb meel hadda beelood oo walaalo ah oo isfilaya in qolo eedeeyo ma rabo laakiin Bah Ararsame hadaad colaad Harti ama Dhulbahante maqasho lug bay kuleeyihiin.
Carada oo nabad Xaabsade ayaa Sool kusoo hogaamiyey asagoo wasiir Puntland ah.
Cali Khaliif waa dhuloos madaxa isu geliyey.
Waxaa lagu xantaa Madhibaan-Ma dareemin!
Allow kala qabooji oo xaqa tus, in dagaal useless ah yahay.
Sxb walaahi igama aha cumar maxamuud bay is laayeen ee Bahararsame wax ka sheeg ee reerka ehel baan nahay dhulbahantaha kale way iiga sokeeyaan waayo wax walba ayaanu isu nahay waxaana jeclahay inay wanaag iyo dhib la’aan noolaadaan lkn waa wax jira weligood sokeeyaha ayay u xoog weyn yihiin ee sanadihiii ugu dambeeyey car ii sheeg sanad ayna qolo isku dhacayn.
Ilaahay miyirka reerka ha ku sugo.
Anigu ma hayo bahararsame ay dad islaynayaan aan ka qoladan hada ay islaynayaan oo la leeyahay lug ayaa ku jirta.
Adinkana waa la ogaa markaad isku dhacdeen inaad inku biloowdeen maxaa yeelay dhul la wada daaqi jiray ayaad baraago ka qodateen iyada oon laga wada hadlin.
War reerku reero dagaal ma aha ha arkin siyaasadaha khaldan ee maamuladu ka dhex wadaan beelaha.